Newsletter AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and ArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia and HBotswanaBouvet IslanBrazilBritish IndiBrunei DarusBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslanCentral AfriChadChileChinaChristmas IsCocos (KeeliColombiaComorosCongoCongo, the DCook IslandsCosta RicaCote D'IvoirCroatiaCubaCyprusCzech RepublDenmarkDjiboutiDominicaDominican ReEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslFaroe IslandFijiFinlandFranceFrench GuianFrench PolynFrench SouthGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissaGuyanaHaitiHeard IslandHoly See (VaHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, IslamiIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, DemocKorea, RepubKuwaitKyrgyzstanLao People'sLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab LiechtensteiLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, tMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Moldova, RepMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands New CaledoniNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslaNorthern MarNorwayOmanPakistanPalauPalestinian PanamaPapua New GuParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FedeRwandaSaint HelenaSaint Kitts Saint LuciaSaint PierreSaint VincenSamoaSan MarinoSao Tome andSaudi ArabiaSenegalSerbia and MSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslaSomaliaSouth AfricaSouth GeorgiSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard andSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab Taiwan, ProvTajikistanTanzania, UnThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad andTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and CaTuvaluUgandaUkraineUnited Arab United KingdUnited StateUnited StateUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamVirgin IslanVirgin IslanWallis and FWestern SahaYemenZambiaZimbabwe	Current Stats 8 visitors online
Total visits: 416331
Wargelin: - KU SOO DHAWOOW RADIO HORMUUD XARUNTA WARARKA SUGAN SIFEEYAHA XAQIIQDA. - - - Hormuud News Friday, May 24th, 2013 | 03:17
[Tuesday, June 19th, 12] :: SHARKA QABYAALADA
Qalinkii Maxamud Cumar Maygaag: Ayaamahan danbe waxa warbaahinta Somaliland, saxaafada iyo Tv yadaba aad ugu soo batay shaygii la odhan jiray ” haddaanu nahay reer hebel” – Mr. Dhanxiir iyo Mr. Qabiil ayaa dhawaan kala saxeexday heshiisyo Somaliland lagaga hirgelinayo mashaariic ku saabsan kobcinta iyo horumarinta Qabyaaladda, waxanay gacanta ku dhigeen ummaddii Somaliland.
Qabyaaladdu wanaag iyo xumaan ba way leedahay – Illaahay Quraankiisa wuxuu inoogu sheegay in qabaa’il iyo shucuub la inooga dhigay si aan isku barano laakiin wuxuu raaciyey intaa keena ugu sharafta mudani in uu yahay keena ugu Allah ka cabsiga badan. Maanta waxaynu arkaynaa qabyaaladdii oo iyadoon biyo is marin lagu faanayo, lagu camal falayo loona baratamayo. Qabyaaladdii oo siyaasaddii Somaliland iyo mujtamacii oo aanay awal ba ka maqnayn si xun ugu dhex milantay. Nabigu “scw” wuxuu ku tilmaamay qabyaalda shay uraya oo qadhmuun. Tima cadana waa kii hore inoogu sheegay in ayna dugsi lahayn qabyaaladi waxay dumiso mooyaane. “Allow yaa naga furdaanshoo qabyaaladda naga fogeeya” waa erayo ka mid ah hees aanu soo saarnay wakhtigii dagaalada sokeeye oo cambaaraynaysa qabyaaladda. Waxaynu gaadhnay hadaynu isku sheegaynu ummad midaysan oo is jecel wakhtigii aynu dadkeena ka xorayn lahayn jahliga qabyaaladda ee bal horta qof walowba isku fiirso oo eeg in aad qayb ka qaadato hirgalinta qabyaaladda ood laftaadu u baahan tahay in aad is yara maydho iyo in kale.
Xaga wanaaga qabyaaladda haddaan u soo kaco, dadkeenu waa dad gob ah oo dun wanaagsan, qabiilkuna marka loo isticmaalo sida diintu ina fartay waxbadan buu hagaajin karaa. Qabyaaladdu xasiloonida, amniga iyo amaanka ay Somaliland ku faanto qayb wayn bay ka ciyaartaa inkastoo ay sidoo kale intaba dumin karto. Soomaaliya maanta waxay la dagi laadahay oo burburka intan leeg ugu wacan waxa ka lumay qiimihii iyo tayaddii wanaagsanayd ee uu qabiilku lahaa ee dadka isku soo dhawayn jiray walaaltinimadoodana sugi jiray. Xaga horumarka, Somaliland maanta waxa ka jira intaasoo mashaariic oo horumar ah asaaskooguna yahay dad isku hayb ah oo badi qurba jooga reer Somaliland soo maal galiyaan. Dhaqankeena suuban qofku hadday dhibaato la soo daristo inta badan inta ehelkiisa ah ama ay isku qabiilka yihiin ayaa taakuleeya marka hore inkastoo inta badan aan loo kala hadhin. Sidaa darteed ma odhan karno qabiilku way shay foolxun mar walba. Dadka reer Somaliland waxay gaadheen heer ka sareeya ku dhaqan qabiil, waxay noqdeen bulsho u midaysan horumarka degaankooda, laakiin maanta wanaaggii ummadda Somaliland wuxuu ku dhaw yahay inuu burburo haddaynaan u gurman dhammaanteen.
Mushkiladda qabyaaladu waa marka aad iska dhaadhaciso in qabiilkaagu kuwa kale ka heer sareeyo, markaad iska dhaadhaciso in qofka aad isku qabiilka tihiin dadka kaloo dhan kaa xigo wanaag iyo xumaana ku raacdo. Marka ficiltan qabiil ku galo ee shaydaanku kaa dhaadhiciyo in qabiilkaagu qabaa’ilka kale dhexdooda ku dulman yahay lagana tagay. Marka daba-kawerwer siyaasadeed ku galo eed soo uruusato inta aad isku qabiilka tihiin adigoo u ololaynaya nin aad isku hayb tihiin in uu soo
baxo talada dalkana gacanta ku dhigo. Markaad waxaa soo dhan samayso adoon is waydiin qabiilkan dagaalka aad ugu jirtaa waxa uu nolol maalmeedkaaga shakhsi ahaan ku soo kordhiyo. Waa su’aale, miyeyna markaa ahayn in lagu dabiibo oo qabyaaladda qardhaas lagaaga dhigo?
Wanaaga iyo gobbanimadu waxay ku jirtaa in aynu shacab ahaan ka korno qabyaaladda keena cudurkeeda faafinayana iska qabano oo u caqli celino. Qabiilkaad ka dhalatay waa sumad aad leedahay oo sida la inoo sheegay aynu isku barano laakiin maaha astaan loogu talagalay in midkeen ka kale iska xigsado kuna soo dhawaysto waayo ummad Musim ah ayeynu nahay oo waxa la inoo sheegay in mu’miniintu walaalo yihiin midkoodna ka kale la jecel yahay waxa uu isla jecelyahay kursiga siyaasadana ku daroo.
Urur iyo Xisbi siyaasadeed qabiil ku dhisani ummadda Somaliland waxba uma soo kordhinayo. Hogaanka wanaagsan yeynaan ku dooran waa reer hebel eh aynu eegno diinta, aqoonta, dadnimada iyo daacadnimadiisa oo yeynaan durmaanka u tumin shakhsi aan ummadda waxba ugu filnayn.
Qofka saaxiibkaa ah eed meel ku soo wada korteen ayaa kaa xiga qofka aad isku haybta tihiin eed shalay baratay. Ka kor qabyaalada bana’aadamnimadaada iyo diintaada ayey wax u dhimaysaaye. Iska xoree oo uga dig inta aad garanayso ee si xun ugu dhaqanta. Ka fogow qofka reer hebel baynu nahay ka baayacmushtareeya. Aqoonyahan iyo indheergarad baan ahay, meel walboo qabyaalada inteeda foolxun lagu hadal hayana safka horaan kaga jirayaa hadal maahee meel sharaftaada ha kaga dhicin.
Aqoondarada iyo garasho la’aanta ka sakaw, qabyaaladdu waxay ka shidaal qaadataa cadaalad xumada. Sidaa darteed waa in aynu ummad ahaan marwalba ku dadaalnaa sidii aynu cadaaladda u ilaalin lahayn wax walbana uga horaysiin lahayn hirgalinteeda. Illaahay ummadda inta cudurka qabyaaladdu ku baahay ha ka daweeyo inta kalana ha ka badbaadiyo. Aamiin.
posted on Tuesday, June 19th, 12
COMMENTS: Sabaax Muuse
Tuesday 19 June 2012, 7:54 pm
SC. Walaal Maxamed waxaad diyaarisay maqaal qiimo iyo qaayo leh. ilaahay hakaa jazaai siiyo ankana inta ku camal fasha ha naga yeelo.
Email : Comment :